पवित्र,सुन्दर अनि भाग्यमानी हुने गर्छन् यी अक्षरबाट नाम शुरु हुने युवतीहरु ! पुरा पढ्नुहोस « Online Tv Nepal
पवित्र,सुन्दर अनि भाग्यमानी हुने गर्छन् यी अक्षरबाट नाम शुरु हुने युवतीहरु ! पुरा पढ्नुहोस
Published :2September, 2018 6:21 pm
नेपाली वर्णमाला अनुसार ४ अक्षर बाट नाम सुरु हुने केटीहरु बढी पबित्र हुने कुरा बताइएको छ । यी ४ अक्षर बाट नाम सुरुहुने व्यक्तिहरु परिवारमा सबैको रोजाईमा पर्ने र समाजमा पनि आफ्नो नाम कमाउन् सक्छन ।
“R” बाट नाम सुरुवात हुने केटीहरु एकदम सुन्दर र भाग्यमानी हुने गर्छन । उनीहरु जस्तोसुकै वाताबरणमा पनि रमाउन जान्दछन् । यी महिलाहरु सधैं आफ्नो पति र परिवारको इज्जत जोगाउन सधै साथमा रहने गर्छन । यिनीहरु आफ्नो परिवारमा सदैब खुशी राख्न तल्लिन हुन्छन ।
“T” बाट नाम सुरुहुने महिलाहरुले समाजमा भलाई कामका वापत धेरै सम्मान पाउने गर्छन । उनीहरु सधै सबैलाई खुशि राख्न सक्छन । यी महिलाहरु धेरैनै सुन्दर र भाग्यमानी हुन्छन । उनीहरु बिहे पश्चात आफ्नो श्रीमानको घरमा आफ्नो शासन जमाएर बस्न सक्छन।
“P” बाट नाम सुरुहुने महिलाहरु धेरै भाबुक र छिटै रिसाउने स्वभावका हुन्छन । यी महिलाहरुको मुख्य विशेषता भनेको आफ्नो कर्तब्यलाई बुझेर त्यसलाई वहन गर्ने क्षमता यीनमा हुन्छ जसको कारण उनीहरुलाई पबित्र मान्ने गरिन्छ । यो अक्षर् बाट नाम सुरुहुने केटीहरु हरदम आफ्नो परिवारको ख्याल गरि जुनसुकै काममा साथ दिने गर्छन ।
“K” बाट नाम सुरुहुने महिलाहरु धेरै भाग्यमानी र उत्तिकै सुन्दर हुने गर्छन । उनीको बाहिरी रुप मात्र नभई भित्रि मन पनि असाध्यै सफा हुन्छ । उनीहरुको मुख्य विशेषता भनेको परिवारलाई साथ दिने र कहिले घमण्डीपन नदेखाउने हो ।